. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: October 2009
မင်းက ပြုံးလိုက်ရင် ချစ်ဖို့ ကောင်းသတဲ့
မင်းက နားလည်မှု ပေးတတ်လွန်းသတဲ့
ချစ်ဖို့ ကောင်းလို့ ချစ်ပါသတဲ့
မင်းက ငါ့အတွက် အကောင်းဆုံးတွေပေးနိုင်တဲ့သူတဲ့
မင်းဟာ ငါ့အတွက် အကောင်းဆုံး မဖြစ်နိုင်ဘူး
မင်းက ငါ့အပေါ် နားမလည်ဘူး
မင်း အပြုံးတွေနဲ့ ငါ့ကို အနိုင်ယူသတဲ့
လေထဲတွင်ပဲ ပျောက်ကွယ်တတ်ပါလား ..
မြင်ရ ကြားရတဲ့ စုံတွဲတွေကို ကြည့်ပြီး ရေးမိတာပါ .. (ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်တော့လည်း မသိဘူးပေါ့ .. :P) အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေတုန်းတော့ အပြစ်မြင်ရိုး ထုံးစံ မရှိပေမယ့် အချစ်ပြယ်ပြီဆိုရင် ပြစ်ချက် အနာအဆာတွေ လက်ညှိုးထိုး မလွဲအောင် ပေါ်ပေါက်လာရတာတော့တာပါပဲ .. hehe .. တရားပေါက်တဲ့ လေသံနဲ့ :P
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/28/2009 12:22:00 PM 37 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ကဗျာ ထင်တယ်, ဖြစ်သမျှအလွဲများ, ဟိုရောက် ဒီရောက်
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/26/2009 11:36:00 PM 25 comments:
ပိုင်ဆိုင်ခြင်း စကားစုကို နားမလည်ဘူးရင် ဘယ်အရာမှလည်း ပိုင်ရလောက်အောင် ကြိုးစားမိမယ် မဟုတ်ဘူး ..
ခုတော့လေ ငါ ပိုင်ဆိုင်ဘူးတယ် .. ဒါ သေချာပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ငါ့မှာ သက်သေဆိုလို့ ပြစရာ ပုံရိပ်တခုတောင် မရှိခဲ့ဘူး ..
စိုင်းစိုင်း သီချင်းမှာတော့ အဲဒီနေ့က မိုးမရွာဘူးတဲ့ .. ငါတို့နှစ်ယောက် နေ့ရက်တွေမှာတော့ မိုးရွာတဲ့ ရက်တွေရော နေပူတဲ့ ရက်တွေ အပြင် မြူဆိုင်းတဲ့ အချိန်တွေပါ ရှိခဲ့ဘူးတာပဲ ..
အချိန်ကာလဆိုတာ နေဒဏ် လေဒဏ်ကြောင့် လုံးပါး ပါးတတ်သလား .. နှစ်တွေစားရင် အရာရာကို မေ့ပျောက်နိုင်မယ်တဲ့လား .. ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး .. တော်တော်များများပြောတာ ငါကြားဖူးတယ် .. သေချာတာ ငါ့အတွက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး ..
သေသောသူ ကြာရင်မေ့တဲ့ .. ဟုတ်တယ် .. နင် သေသွားပြီ .. ငါ့အတွေးထဲမှာ .. ငါကိုယ်တိုင် သတ်ပစ်ခဲ့တယ်လေ .. ဒါပေမယ့် ငါ မမေ့သေးဘူး .. နာကျင်စွာနဲ့ သတိတရ ရှိတုန်း .. ဒဏ်ရာတော့ ငါ့ကိုယ်မှာ မရှိခဲ့ဘူး .. စိတ်ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးမှာ ..
ပျောက်သောသူ ရှာလျှင်တွေ့တဲ့ .. ငါသာ လိုက်ရှာမယ်ဆို တွေ့ခွင့် ရှိဦးမလား .. ငါ တကယ်ပဲ ပြန်တွေ့ချင်နေလား .. တကယ်တမ်း ပြန်တွေ့တော့ရော အခြေအနေတွေက ဘယ်လို ပြောင်းလဲနိုင်ဦးမှာတဲ့လဲ .. အင်း .. မထူးပါဘူး .. ငါ နေသားကျဖို့ ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ် .. ထူးဆန်းတာ တခုကတော့ နင်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့လူ တဦးတယောက်များ မြင်လိုက်မိရင် ငါ့ ကမ္ဘာကြီး ချာချာလည်သွားတယ် ..
ခုလေးပဲ .. ငါ ခေါင်းငုံ လမ်းလျှောက်နေတုန်း ရှေ့က လူတယောက် ဖြတ်လျှောက်သွားတယ် .. ကတ္တီပါ ဖိနပ် သျှားရောင်လေး .. ငါ မော့ကြည့်မိတော့မလို့ .. နထင်က သွေးတိုးတဲ့အသံ တဒုတ်ဒုတ် ငါကြားနေရတယ် .. ငါဟာလေ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိနေရက်နဲ့ မိုက်မဲနေသေးသူ တယောက် ..
ငါဟာလေ အမှတ်မရှိတဲ့သူ .. နင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အိနြေ္ဒပျက်လောက်အောင် ငါစိတ်တွေ ထွေပြားတယ် ..
နှစ်တွေလဲ ကြာခဲ့ပြီ .. မေ့မယ်ဆို လုံလောက်နေပါပြီ .. ဒါပေမယ့် ငါ ဆိုးသွမ်းစွာနဲ့ မေ့ဖို့ကို နှမြောတသနေတယ် .. ငါပိုင်ဆိုင်တာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်လေး တခုသာပဲလေ .. ဒါကြောင့်လဲ ငါ့ကို မိုက်မဲလိုက်တာ လို့တော့ မဆိုလောက်ပါဘူး ..
ငါ့ကို မရီပါနဲ့ .. မလှောင်ပါနဲ့ .. မိုက်လိုက်တာလို့ မပြောပါနဲ့ .. နှစ်သိမ့်စကားလည်း ပြောစရာ မလိုပါဘူး .. မသိချင်ယောင်လေးသာ ဆောင်သွားပေးပါ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/24/2009 02:09:00 AM 28 comments:
ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အရာလည်း မရှိ
ကျက် မှတ် မနေချင်တော့ဘူး
P.S အပေါ်က စာကို ဖတ်ပြီး မိုးခါးတယောက် သမာဓိတွေ ကောင်းနေပြီတော့ မထင်ပါနဲ့ .. ခုတလော စိတ်တွေက ရှုပ်လာလိုက် ဒေါသတွေထွက်လိုက်နဲ့ အရူးထနေလို့ :D စိတ်တိုင်း မကျတဲ့ အရာတွေက များနေတယ် .. ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာနေတာပါ .. တကယ်တော့လည်း ဒါ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးလိုက်ရင်လည်း ပြီးသွားတာပါပဲ .. အဲလိုဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစားနေတော့မယ် ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/21/2009 10:25:00 PM 26 comments:
ငယ်ငယ်ကတော့ ထင်ခဲ့တာက လူကြီးတွေက ကိုယ့်ကို နားမလည်ဘူးပေါ့ .. လူငယ်တွေဘက်က ခံစားချက်ကို ချုပ်နှောင်တယ်လို့ ထင်မြင်ဘူးတယ် .. ကိုယ်က လွတ်လပ်ချင်တယ် .. လူကြီးတွေ (အထူးသဖြင့် အဖေနဲ့ အမေ)က ဘောင်တခု အတွင်းမှာ နေစေချင်တယ် .. အရင်ကတော့ အဲဒီဘောင်ဟာ ကိုယ့်အတွက် တော်တော်ကို စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်စရာ ကောင်းခဲ့ဘူးတယ် .. ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလဲ လူကြီးတွေကို အပြစ်တွေ မြင်လို့ပေါ့ ..
ခုအသက် အရွယ်ကို ရောက်လာတော့ လူကြီးတွေ နေရာကနေ မြင်ပေး တွေးပေးနိုင်လာသလို ကိုယ့်အောက်က အငယ်တွေ (အထူးသဖြင့် စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့ သူတွေ)က ကိုယ်အရင် ရှိနေခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာတခုက ခံစားချက်မျိုးတွေ ကြားလာ သိလာတော့လည်း ကိုယ့်အရွယ်ရောက်ရင် နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ ပြောပြနေမိတယ် .. ဒါဟာ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတခုက ရရှိလာတဲ့ သင်ခန်းစာ အတွေ့အကြုံတခုပဲလို့ ထင်မိတယ် ..
ခု ကိုယ့်ခံစားချက်က ကိုယ့်အပေါ် အရင်က နားမလည်ပေးဘူးထင်မိတဲ့ အဖေနဲ့ အမေကို အရမ်းကို အားနာမိတယ် .. ကိုယ့်အပေါ် သူတို့လောက် နားလည် ခံစားပေးနိုင်မယ့်လူ ရှိနိုင်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး .. ရှိလာခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် မှီမယ် မထင်မိဘူး ..
အမေ့ချက်ကြိုးကတဆင့် အာဟာရတွေ ရယူခဲ့ဘူးလို့ မိခင်နဲ့ သားသမီးတွေ စိတ်ခံစားချက်ချင်း ဆက်သွယ်ခံစားနိုင်တယ်တဲ့ .. ယုံကြည်မိတယ် .. အဖေကရော .. မွေးလာတည်းက အရိပ်တကြည့်ကြည့် သားသမီး မျက်နှာ မငြိုးအောင် ကြိုးစားဖြည့်ဆည်း ရုန်းကန်ပေးနေတဲ့ ဒီ အဖေရဲ့ သွေးကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ သွင်သွင် စီးနေတယ်လေ ..
ဒီတော့ ဖုန်းမဆက်ဘူးဆိုရင်တောင် ဟိုဘက်က အဖေနဲ့ အမေက ကိုယ့်အခြေအနေကို ခန့်မှန်းနေမိပြီးပြီ .. အသံမကြားရရုံနဲ့ စိတ်ပူနေတတ်ခဲ့ပြီ ..
အသံကြားရပြီဆိုရင်ရော .. အသံကြားရုံနဲ့ ဒီ သားသမီး စိတ်ဆင်းရဲနေသလား ပျော်ရွှင်နေသလား ခံစားသိနိုင်ခဲ့တာ မိဘရဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ အာရုံခံစားမှုပါပဲ .. ဒါတွေက ညာလို့ မရနိုင်ဘူး .. ခံစားချက်ကို ယုံလို့ရတယ် ..
ကိုယ် ထင်ထားခဲ့တာက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်သဘောထားကို ဘယ်သူမှ အမှန် ဖတ်နိုင်လိမ့်မယ် မထင်ဘူးလို့လေ ..
သိပ်မကြာခင်ကပဲ နားလည်လိုက်တာက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို နားလည်ခံစားပေးနိုင်မယ့်သူက အဖေနဲ့ အမေပဲ ရှိတယ် .. ကိုယ် ၀မ်းနည်းရင် သူတို့လည်း ၀မ်းနည်းမယ် .. ကိုယ် နာကျင်ရင် သူတို့လည်း နာကျင်တယ် .. ကိုယ် ပျော်နေရင် သူတို့လည်း လိုက် ပျော်ရွှင်နေမှာပဲ .. သူတို့ကတောင် ကိုယ့်ထက် ပိုနိုင်သေးတယ် ..
ခုတလော အမေ့အသံကြားရင် စိတ်က ၀မ်းနည်းတယ် .. ဒီခံစားချက်က ပထမဆုံး အကြိမ်လို့ ပြောရင် လွန်နေမလားပဲ .. အရင်က အိမ်လွမ်းတယ်ဆိုတာလည်း ပြောရလောက်အောင် မဟုတ်ဘူး .. မိဘကို သတိရတယ်ဆိုတာလည်း ခဏတဖြုတ်ပြီးရင် လျော့လျော့ရဲရဲပဲ .. စိတ် ကြာကြာ အညစ်မခံတတ်တဲ့ ကိုယ့်ညဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..
ဒီကို လာခါစကတော့ ကိုယ့် စိတ်ကူး ကိုယ့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပဲ ခေါင်းထဲ ထည့်ထားမိတယ် .. ခေါင်းမာတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်း သိထားလို့လည်း အဖေရော အမေရောက ပံ့ပိုးဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံပါ .. အမေကတော့ တားချင်ပေမယ့် အဖေကတော့ အားပေးခဲ့တယ် .. အဖေက ကိုယ့်ကို အယုံကြည်ဆုံး .. ဒီယုံကြည်ထားတဲ့ စိတ်ကိုလည်း စိတ်ပျက်စရာ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားရဦးမယ် .. အမေကတော့ မိန်းမသား ပီပီ စိတ်ပူတယ် .. ခုချိန်ထိ စိတ်မချနိုင်သေးဘူး .. ဓါတ်ပုံတွေ ပို့ပေးလို့ ဘေးနားက တွဲရိုက်ထားသမျှ အကုန် မေးတတ်တယ် ..
အဖေနဲ့ အမေနဲ့ မေတ္တာကို နားလည် လာလေလေ ကိုယ်တိုင် မိခင်ဖြစ်ရာမှာတောင် ကြောက်လာတယ် .. ကြွေးသစ်တွေယူပြီး ပူလောင်ရဦးမှာလားလို့လေ .. ခုတွေးမိလို့သာပါ .. တကယ်တော့ ဝေးနေပါသေးတယ် .. ကိုယ်တိုင်လည်း သိတယ် .. အရည်အချင်း မရှိသေးဘူးလို့ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/20/2009 11:46:00 PM 24 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ခံစားချက်, ဒိုင်ယာရီ, ဟိုရောက် ဒီရောက်
သီချင်းနားထောင်တယ်ဆိုတာ စိတ်ထွက်ပေါက်တခု စိတ်ဖျော်ဖြေမှု တခုအနေနဲ့ မိုးခါးကတော့ သတ်မှတ်မိပါတယ် .. ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ညစ်လည်း နားထောင်တယ် ပျော်လည်း နားထောင်တယ် ဘယ်လိုမှ မနေလည်း နားထောင်တယ် .. သဘောကတော့ အိမ်မှာ ရှိနေချိန်ဆို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ သီချင်း နားထောင်ဖြစ်ပါတယ် ..
သီချင်းနားထောင်ရတာကို သဘောကျတယ် .. ရွေးပြီး နားထောင်ဖြစ်တာ ရှားတယ် .. ကိုယ်ကြိုက်လို့ ဒေါင်းထားသမျှ မျက်စိထဲတွေ့တာ ဖွင့်တယ် .. အသစ်ထွက်တယ်ဆိုမှ ဒါကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ နားထောင်ဖြစ်တတ်တာ ..
သီချင်းနားထောင်ပြီး ကိုယ့်ရင်ထဲ ရောက်လာတဲ့ ခံစားချက်ကို ကြိုက်တယ် .. ဘယ်နားက သီချင်းသံ ကြားကြား ကိုယ်ရတာဆို ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲပါ ရောက်လာတာပဲ ..
ဗညားရှိန်က ဆိုညည်းနေကျ သီချင်းလေးများဆိုပြီး တဂ်တော့ အမြဲတမ်း မညည်းဖြစ်ပဲ ကြားရာလိုက်ဆို ကြုံရာ နားထောင်တဲ့ မိုးခါးတို့ စဉ်းစားရ ကြပ်ပါပီ ..
ခု နားထောင်နေတဲ့ သီချင်းလေးတွေထဲက နားထောင်စေချင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကိုပဲ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတော့မယ် ..း))
လမ်းဆုံ အခွေထဲက ၀ိုင်းစု ဆိုထားတဲ့ အပြစ်မမြင်သီချင်းလေး ကြိုက်ပါတယ် .. အပြင်မှာတော့ သူ့လို အပြစ်မမြင်ပဲ နေနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး .. :P
အာဇာနည်ရဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန် ..
Lဆိုင်းဇီသီချင်း တော်တော် များများ ကြိုက်ပါတယ် .. ဒီသီချင်းလည်း ကြိုက်ပါတယ် ..
ဆုန်သင်းပါ သီချင်းတွေလည်း ကြိုက်တယ် .. တင်ချင်လို့ ရှာတာက သခင် သီချင်းပါ .. မတွေ့ဘူး .. ဒါနဲ့ ခုသီချင်းပဲ ညည်းလိုက်ပါတယ် ..း))
ဆိုညည်းတဲ့ သီချင်းတွေဆိုပြီး တဂ်တဲ့ ဗညားအတွက် ဒီပို့စ်ကို ရေးပါတယ် ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/18/2009 11:40:00 PM 21 comments:
ဒဏ်ရာ နက်နက် တခုသာလိုတာ
အတိတ်ကို အတိတ်မှန်း သိဖို့
ဗညားရှိန်ကို တဂ်ကြွေးပေးမလို့ ရေးထားတဲ့စာ အကုန်ပြီးမှ လက်ကလိလိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားလို့ စိတ်လေသွားတယ် .. ဒါနဲ့ ရေးချင်တာ လျှောက်ရေးလိုက်တယ် .. :D
ဗညားရေ ခဏတော့ စောင့်လိုက်ဦးဟေ့ .. :P
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/14/2009 12:47:00 PM 18 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ကဗျာ ထင်တယ်, ဟိုရောက် ဒီရောက်
Rules : It's harder than it looks! Copy to your own note, erase my answers ,enter yours.Use the first letter of your name to answer each of the following questions.If the person before you had the same first initial , you must use different answers.You cannot use any word twice and you can't use your name for the boy/girl name question.
1. What is your name – Moe Khar
2. A four letter word – Mark
3. A boy’s name – Michael
4. A girl’s name - Madonna
5. An occupation – Mathematician
6. A color – Mahogany
7. Something you’ll wear - Muff
8. A food – Mango
9. Something found in the bathroom – Mitten
10. A place – Mecca
11. A reason for being late – Missing Key
12. Something you’d shout – Move Move Move
13. A movie title – My Bloody Valentine
14. Something you drink – Mocha
15. A musical group – M2M
16. An animal – Mouse
17. A street name – Macpherson Road (at singapore)
18. A type of car – Maserati
19. The title of the song – My Love
20. A verb – Meditate
ပန်းရင့် တဂ်တဲ့ ဂိမ်းလေးပါ .. မူးသွားပြီ .. ဒေါက်တာ လာကုတော့ :P
1. What is your name : မိုးခါး
2. A four Letter Word : မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း
3. A boy's Name : မိုးထက်မြင့်
4. A girl's Name : မိုးနှောင်း
5. An occupation : မိုးလေ၀သ နဲ့ ဇလဗေဒ
6. A color : မိုးပြာရောင်
7. Something you'll wear : မိုးကာအကျီ
8. A food : မိုးကျလက်ဖက်
9. Something found in the bathroom : မိုးရေ
10. A place : မိုးကုတ်
11. A reason for being late : မိုးခိုနေလို့
12. Something you'd shout : မိုးရွာနေပြီ
13. A movie title : မိုးည
14. Something you drink : မိုးပုလဲသီး ဖျော်ရည်
15. A musical group : မိုနိုပိုလီ
16. An animal : မိုးကောင်းငှက်
17. A street name : မိုးကောင်းလမ်း
18. A type of car : မူကြိုကား
19. The title ofasong : မိုးပြေး
20. A verb : မိုးမျှော်သည်
အဆိပ်ခွက်က မ for မိုးခါး ဆိုပြီး တဂ်ပါတယ် .. လျှာရှည်ပြီး မိုးတွေ လိုက်ရှာတာ .. ကားနဲ့ သီချင်းအဖွဲ့ကျ ရှာမရတော့ဘူး .. :D
ရေတမာ ညီညီ နွေးနေခြည် .. မေသူ .. နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ချိုကိုသဇင် တို့ကို ဆက်ပြီး ခေါင်းစားပါမယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/13/2009 12:00:00 PM 18 comments:
အေးမြခြင်း အသွင် ပြောင်းသတဲ့
ကိုယ်ဆီ အိပ်မက်တွေ မက်လို့
ပန်းချီတွေ ဆွဲလား ဆွဲရဲ့
ငါတို့ အိပ်မက် ကမ္ဘာမှာ
ခုတလော စိတ်က ခပ်ချဉ်ချဉ် ဖြစ်တုန်း .. မတရားတာတွေကို သိနေ မြင်နေလဲ ဘာမှလုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ ဘ၀ ..
ဟိုတလောက ဦးလေးတွေ မလေးကို သွားလည်ကြတယ် .. ဒီကနေ package နဲ့ သွားတယ် .. အားလုံး ၄ ယောက်ပေါ့ .. စစချင်း package သွားဝယ်တည်းက ဒေါသက ထွက်ချင်စရာ .. ဘယ်လိုဆို ဘယ်လောက် ဘယ်လိုဆို ဘယ်လောက် ပြောဆိုပြီးမှ ဘယ်က လာသလဲဆိုပြီး ရောက်သွားတယ် .. မြန်မာပြည်ကြီးကပေါ့ .. ဂုဏ်ယူစွာ ဖြေကြားလိုက်တယ် .. ချက်ချင်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး ယူထားတဲ့ ဗီဇာတွေကို အခန်းထဲ ယူသွားပြီး စစ် မစစ် စစ်ဆေးပါသတဲ့ .. (ဒီလို အထင်ကြီးခံရတာ)
၀ယ်ပြီးပြီ သွားဖို့လုပ်ပြီး သွားကြပြီပေါ့ .. အ၀င်လည်းရောက်ရော ပတ်စ်စပို့ကို ကြည့်တာနဲ့ ရစ်ရောတဲ့ .. အပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်ကို fix မလုပ်ထားလို့လေး ဘာလေးနဲ့ .. တကယ်တော့ သွားကြတဲ့ လူတွေ အကုန်လုံး အသက်က ၄၅ နှစ် အထက်တွေ ချည်းပဲ .. ကားပေါ်ပါသမျှ လူတွေ အကုန် ရှင်းပြီ ဒီလေး ယောက်ပဲ ပြီး မပြီးနိုင်ဘူး .. ဗီဇာယူသွားတဲ့ အပြင်ကို နောက်ထပ် စလုံး ၂၅ ဒေါ်လာစီဆိုလား (ဒါထက်များမယ် ထင်တယ်) ထပ်ပေးရတယ်တဲ့ ..
ဘာဖြစ်လို့လဲ မြန်မာပတ်စ်ပို့ ကိုင်ထားတာနဲ့ နှာခေါင်း ရှုံ့ချင်ကြတာ .. မြန်မာဆိုတာနဲ့ ခိုးမယ့် လူလား ၀ှက်မယ့်လူလား မယုံသင်္ကာဖြစ်ရတာ .. ဟူးးးးးးးးးးးးးး ... မောတယ် .. မောတယ် .. မပြောချင်တော့ပါဘူး .. ဆက်ပြောရင် နိုင်ငံရေးတွေ ပါလာတော့မယ် .. :P
မနေနိုင်လို့ ဆက်ပြောဦးမယ် ..
ကိုယ်စီကိုယ်စီ တာဝန်တွေယူကြရမယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားတွေ ထွက်ကြတယ် .. အိပ်မက်တွေနဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ .. ဘယ်နိုင်ငံ ရောက်ရောက် နှိမ်ခံရတယ် .. အဲဒီ ဒဏ်တွေကို ကြိတ်မှိတ်ခံပြီး ကြိုးစား ရုန်းကန်ကြတယ် .. မိုးခါးကတော့ စလုံးပဲ ရောက်ဘူးပြီး ဒီက အကြောင်းလောက်ပဲ နဲနဲပါးပါး သိတာပါ .. အများကြီး မသိဘူး .. ခုနောက်ပိုင်းဆို အလုပ်တွေ နားတယ် ရပ်တယ် .. အလုပ်လာရှာတယ် မရကြဘူး .. အပျော်လာကြတာလည်း မဟုတ်ဘူး .. ဆုံးရှုံးကြရတယ် .. အကြွေးတွေ တင်ကြတယ် .. ကုန်သွားတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လို ပြန်ရှာမလဲ ..
ဘယ်သူက အတင်းသွားခိုင်းလို့လဲ .. ကိုယ့်ဟာကိုယ် လျှာရှည်ပြီး ထွက်လာကြတာလေ .. ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံပဲ ..
ဘယ်သူကရော လာချင်လို့ လာမလဲ .. မိဝေး ဖဝေး ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့စကားတောင် သေသေချာချာ လိပ်ပတ်လည်အောင် မပြောနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကို ဘယ်သူက လာချင်လို့ လာနေမှာလဲ .. ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ရှိနေလို့ နေနေရတာပဲလေ .. ဒါကလည်း နေထိုင်ခွင့်ရှိတုန်းလေးသာ နေခွင့်ရတာ .. အလုပ်သာ ချက်ချင်းပြုတ်သွားလို့ကတော့ လာရာလမ်းအတိုင်း လှည့်ပြန်ပေတော့ပဲ .. (ကိုယ့်အလှည့်လဲ ဘယ်တော့ မသိနိုင်ဘူး .. ဘုရား တရား တနေရတယ်)
တော်ပီ ဆက်မပြောတော့ဘူး .. (တကယ်မပြောတော့ဘူး .. :D)
အားလုံး ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားနိုင်ကြပါစေ ..
ps. အောက်မှာတော့ ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် တွေးခိုင်းထားတာပဲ .. ဒီအဖြစ်ကို ဘယ်လို ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် တွေးရပ .. အမှတ်ကလေးနဲ့သာ နေပါတော့မယ် .. ဖြစ်တယ် ပျက်တယ်ပေါ့နော် .. :(
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/07/2009 11:36:00 AM 21 comments: